वडास्तरमा समेत विपद् समिति - Awajonline Online Newspaper
वडास्तरमा समेत विपद् समिति
आवाज संवाददाता २८ मंसिर २०७४, बिहीबार
दोलखा, २८ मंसिर
प्रकोपका घटना बढी हुन थालेपछि स्थानीयस्तरमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन हुन थालेका छन् । प्रकोप घटनाहरु बढ्न थालेपछि सरकारले स्थानीय स्तरसम्म विपत् व्यवस्थापन गठन गर्ने योजना ल्याएपछि विपत् व्यवस्थापन समिति वडा तहसम्म गठन हुन थालेका हुन् ।
साँढे २ वर्ष अघिको भुकम्पपछि यो समितिले बढी काम गर्नु परेकाले यसको आवश्यकता बढेको दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटवालले जानकारी दिए । सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन नै जारी गरेकाले सोही अनुसार वडा तहसम्म अब विपद् व्यवस्थापन समिति बन्ने बताए ।
विगतमा जिल्लास्तरमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति मात्र क्रियाशिल थियो । त्यो पनि बाढी पहिरो जाँदा मात्र क्रियाशिल हुन्थ्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने सो समितिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरु हुन्थे ।
वडा तहमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा र गाउँपालिका÷नगरपालिकामा सम्बन्धित प्रमुखको अध्यक्षतामा ति समिति बन्ने व्यवस्था छ । दोलखामा विगू गाउँपालिका, कालिञ्चोक गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ । त्यसैगरी वैत्यश्वर, गौरीशंकर र मेलुङ गाउँपालिकामा पनि विपत् व्यवस्थापन समिति गठन तयारी भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाहरुमा गाउँपालिका स्तरीय र वडा तहसम्मको विपत् व्यवस्थापन योजना समेत तयार भएको छ । विगू, कालिञ्चोक गाउँपालिका र जिरी नगरपालिकाको विपत् व्यवस्थापन योजना तयार भएको छ । बैत्यश्वर, गौरीशंकर र मेलुङ गाउँपालिकोका पनि योजना तयारीको चरणमा छ ।
गैसस महासंघ दोलखाका उपाध्यक्ष समेत रहेका सामुदायिक विकास मञ्च दोलखाका अध्यक्ष राजु थापाले भुकम्पपछि विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरु पनि बढेको बताए । गैर सरकारी संस्थाहरुले समेत विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा योजना बनाउन सहयोग गरेको उनले बताए ।
हिउँदमा सुविधाका लागि जथाभावी सडक निर्माण गर्दा वर्षात्मा पहिरोको जोखिम बढी देखिएको छ । सडक निर्माण गर्दा प्राविधिक सर्भे नहुनु र पानीको उचित निकास नहुँदा गाउँ गाउँमा पहिरो गएको हो ।
आफ्नै पहलमा खनिएको सडकले पहिरो र बाढीको जोखिम बढेपछि गाउँलेहरु गाउँ जोगाउन आफैं सक्रिय हुन थालेका छन् । स्थानीयहरु आफ्नै पहलमा पहिरो रोकथाम र भलकुलो तर्काएर गएको वर्षात्मा एक दर्जन बढी बस्ती जोगाएका छन् ।
‘पहिरो कुनै प्राकृतिक कारणले आउँछन्, त कति आफैंले बनाउने संरचनाका कारण पनि हुँदो रहेछ’ विगू ४ का वडा अध्यक्ष बुक्ताम तमाङले भने ‘पछिल्लो समयमा धेरै पहिरो हामीले खनेका सडक व्यवस्थापन नगर्दा भएका छन् ।’
विगू गाउँपालिका वडा नं. ४ र कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ को विपत् व्यवस्थापन समिति र विभिन्न उपसममितिहरु समेत गठन भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ३ वटै वडामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पीकरण कार्ययोजना अनुसार १४ गाउँमा ग्याविन वाल र भलकुलो बनाएका छन् ।
स्थानीयहरुकै सक्रियतामा लादुकको ढुङ्गेश्वरी आधारभूत विद्यालय र लामिडाँडाको हिलेपानी संस्कृत माविमा पहिरोको जोखिमबाट बचाउन ग्याविन वाल लगाएको छ । त्यसले विद्यलयको लाखौंको भवन क्षति हुनबाट बचाएको विगू गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष बुक्ताम तमाङले बताए ।
स्थानीयस्तरमा सडक खन्दा आउने पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि ग्याविन बाल लगाइएको छ । स्थानीयहरुको सक्रियतामा लगाइएको ग्याविन गुणस्तरको नभएको अनुगमणमा लादुक पुगेका जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका सदस्य मुरारीराज शिवाकोटीले बताए ।
‘ग्याविन लगाउँदा सडकलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी लगाउँनु पथ्यो ’ उनले भने ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट र सडकको पानी तर्काउन नमिल्ने खाल्को देखिएको छ ।’ स्थानीयले गाउँ बस्ती जोखाउनका लागि जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय, जल तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, गाउँपालिका र सामुदायिक विकास मञ्च प्रयास परियोजनाबाट समेत सहयोग लिएका छन् । प्रकोप जान थालेपछि वडास्तरमा समेत विपद् कोषको व्यवस्था गरिएको वडा अध्यक्ष तमाङले बताए ।